अन्तरिक्षमा गएपछि मान्छेको उचाईँ बढ्छ, कसरी ? | Kendrabindu Nepal Online News
अन्तरिक्षमा गएपछि मान्छेको उचाईँ बढ्छ, कसरी ?
३० पुष २०७४, आईतवार १०:१३
तिन हप्ता अघिमात्रै अन्तरीक्ष स्टेसनमा आइपुगेका एक जापानी अन्तरिक्षयात्रीले आफ्नो जिउ ९ सेन्टिमिटरले लम्बिएको भनाई सच्चाएका छन् । साथै उनले मापनको गल्तीले गर्दा यस्तो भएको भन्दै माफी मागेका छन् ।
आफु वास्तवमा २ सेन्टिमिटर मात्रले अग्लो भएको भएको तर नापमा गल्ती हुँदा ९ सेन्टिमिटर हुन गएको उनले बताएका छन् ।
जापानी अन्तरीक्षयात्री नोरिसिगे कानाइले टि्वटमार्फत यस्तो बताएका छन् ।
अन्तरीक्षमा गएपछि ९ सेमी अग्लो भएको भनी उनले यसअघि टि्वट गरेपछि त्यसले विश्वभर नै चर्चा कमाएको थियो । वैज्ञानिकहरुका अनुसार अन्तरीक्षमा गइसकेपछि यात्रीको सरीर औषतमा २ देखि ५ सेमीले अग्लो हुनु स्वभाविकै हो । तर जापानी अन्तरीक्षयात्री कानाईले चाहीँ आफु ९ सेमी अग्लो भएको जिकिर गरेका थिए ।
उनले टि्वट गरी लेखेका थिए, ‘गुड मर्निङ सबैजनालाई । मैले आज एउटा महत्वपूर्ण घोषणा गर्दैछु । हामी अन्तरीक्षमा पुगेपछि हाम्रो जिउको नाम लिएका थियौँ । र, ओहो म त ९ सेमीले बढेछु ।’जम्मा ३ हप्तामै बिरुवा जस्तै गरी आफु बढेको उनले बताएका थिए ।
वैज्ञानिकहरुका अनुसार अन्तरीक्षमा गुरुत्व बलको अभाव हुने हुँदा मेरुदण्डका हड्डीहरुबीचको ठाउँ फैलिने गर्दछ, जसका कारण मानिसको उचाई बढ्दछ ।
अन्तरीक्षमा केही बढेका अन्तरीक्षयात्रीहरु पृथ्वीमा फर्किसकेपछि भने केही समयमै पहिलेकै उचाइमा र्झदछन् । बीबीसी
Prevगौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण एक वर्षभित्र पूरा हुने
दार्जिलिङमा आँचल र पललाई फ्यानहरुबाट जोगाउन मुस्किलNext